Qalabka dharka → Dharka shaqada • Dharka xirfadeed ee kumbuyuutar
Qalabka dharka waa xulasho badeecooyin lagu dabaqi karo warshado kala duwan. accessoriesoo aan ku bixinno dukaankeennu waa alaab ka timid soo-saareyaasha oo aan iskaashi kala yeelanno gudbinta dharka iyo dharka.
Waxaad hubsan kartaa inay yihiin kuwo tayo sare leh. Waxaan la shaqeynaa sumado aamin ah oo aan ku raaxeysanayn oo keliya ra'yi togan, laakiin sidoo kale taxaddar si loo ballaariyo baaxadda. Qaybtan waxaad ka iibsan kartaa, iyo kuwo kale xirmooyinka, waji shareerka ama gaashaanka wajiga.
Bixinta aan soo jeedineyno waxay u heellan tahay labada shirkadood iyo macaamiisha gaarka loo leeyahay. Mahadsanid joogto ah shaqo kooxeed iyo amarro waaweyn, waxaan kuu soo bandhigi karnaa qiimo soo jiidasho leh oo ka bilaabmaya hal shay. Amarrada waaweyn, waxaa jira qiimo dhimis dheeraad ah.
Qalabka dharka waa cunsur aan la kala soocin karin oo loogu talagalay qof walba oo dan ka leh muuqaal dhammaystiran oo joogto ah. Xirashada moodada ah ayaa si xarrago leh ugu habboon shaatiga, haddii shaatigana lagu taajiro astaan ​​shaqsiyeed ama shaashad shirkadeed oo sax ah, waxay kordhisaa sharafta shirkadda waxayna dhiirrigelisaa kalsooni weyn oo shaqaalaha ah.
Xidho oo ka samaysan dhar raagaya oo leh tolmo cufan, oo u adkaysata waxyeellada muddo dheer, dhammaantoodna uga dhigaya mid cusub inta ugu macquulsan. Tartankan ayaa si xamaasad leh loo soo iibsaday si loogu kabo dharka shaqaalaha hudheelka ee miiska soo dhaweynta iyo kuwa sugaya iyo makhaayadaha.
Maaskarada difaaca ee afka iyo sanka, oo ku kala duwan noocyo kala duwan, ayaa wali caan ah. Midabada tirada badan ayaa runtii kuu oggolaan doonta inaad wax u doorato dadka waaweyn iyo carruurta. Maaskarada waxaa lagu tolay qolkeenna tolidda, taas oo aan ugu mahadnaqeyno waxyaabaha la isticmaalay iyo tayada shaqaynta.
Waxay ka samaysan yihiin dhar ammaan ah oo ka samaysan waxyaabo la caddeeyey oo aan ku jirin wax isku-darka sunta ah. Waxaan iibinnaa waji-gashiga dib loo isticmaali karo iyo waji-gashiga la tuuri karo. Waxaan sidoo kale leenahay maaskarado leh jeebka shaandhada la bedeli karo.
Maaskarada cudbiga, garaafka
Kuwa doonaya raaxo dheeraad ah iyo xorriyad adeegsiga oo leh gaashaan isku mid ah isla markaa, waxaannu u abuurnay laba nooc oo koofiyad. Waxaan leenahay koofiyadaha wajiga oo buuxa oo ka samaysan indho-beel cudbi ah iyo maaskaro iyo koofiyadaha yaryar wuxuu daboolaa habeenka iyo bushimaha, gaar ahaan raaxada dadka leh muraayadaha indhaha. Wax soo saarkayagu waxay la kulmaan xeerarka iyo heerarka ku habboon.
Koofiyad sanka iyo afka ah
Koofiyadda wejiga oo buuxa
qalabka dharkadharka ragga